Sida Loogu Isticmaalo Miisaanka Jikada ee Dijitaalka ah ee Dubitaanka - Blog
Pies Iyo Tarts
Sida Loo Isticmaalo Miisaanka Jikada ee Dijital ah
Waxaan u isticmaalaa cabbirka jikada dhijitaalka ah qaab aad u qurux badan oo kasta oo aan ku qoro boggan. Sababta Sababtoo ah waxaan rabaa cuntada sida aan makaroonka faransiiska iyo keega buluugga ah inuu si fiican kuugu soo baxo mar kasta. Malayn male, walaac la'aan. Aan ku tuso sida ay u fududahay isticmaalka miisaanka jikada ee dubista.
Iyada oo leh cabbirka jikada ee dhijitaalka ah, waxaad si sahal ah ugu dari kartaa maaddooyinkaaga baaquli isku darka si dhakhso leh oo sax ah adigoon ku nijaasayn koobabka iyo saxamada dheeraadka ah Waxa ugufiican dhamaan, waxaad labalaabi kartaa oo seddex jibaarikartaa si fudud waxaadnaheli kartaa natiijooyin soo noqnoqon kara markasta.
Ha ku baqin adoo isticmaalaya miisaanka jikada ee dubista. Way fududahay in la sameeyo waxayna kaa badbaadineysaa inaad lumiso maaddooyinka, waqtiga iyo inaad jahwareerto!
steve harvey oo ku dhawaaqday khalad miss america
Waa maxay farqiga u dhexeeya cabbirka koobabka iyo miisaanka jikada?
Koobabka cabbiraadda ayaa lagu cabiraa mugga (intee in le'eg ayuu jirku ku fadhiyaa walaxda). Miisaanka jikada ayaa lagu cabiraa culeys ahaan ama wadar ahaan wadarta guud.
Weligaa ma maqashay oraahdaas, 'Maxaa ka culus, rodol baalal ama rodol dhagax ah?' Waa su’aal khiyaamo ah maxaa yeelay labadooduba isku miisaan ayey leeyihiin. Laakiin rodol baalal ah ayaa laga yaabaa inuu qaato qol dhan halka rodol dhagax ah ay ku habboonaan karaan calaacasha gacantaada.
Maxay tahay inaad u isticmaasho cabirka jikada dhijitaalka ah?
Weligay ma isticmaalin miisaanka jikada ee dhijitaalka ah illaa aan ka aado iskuulka keega. Ilaa laga gaaro xilligaas, marwalba waxaan u isticmaali jiray koobabka wax lagu cabiro wax walba. Maaha inaan ahaa qaar wax dubta oo weyn. Waxaan lahaa aqoon aad uyar oo ku saabsan sida xitaa loo akhriyo habka cuntada markaan go'aansado inaan dhigto dugsiga rootiga. Laakiin waan ogaa inaan rabo inaan kaliya sameeyo keegag qurux badan laakiin waxaan doonayay inay iyaguna dhadhan fiican yeeshaan!
Kuuggayagu wuxuu sameeyay seddex banaanbaxyo fudud. Mudaaharaadkii ugu horreeyay, wuxuu hortiisa ku lahaa saddex koob oo wax lagu cabiro. Mid biyo ka buuxaan, mid bur ah iyo mid shukulaato ku jira. Dadka badankood ee khibrad yar u leh dubista ayaa og inay hal koob u dhigmaan 8 wiqiyadood oo sax ah? Uguyaraan taasi waa sidaan moodayay.
Koobkeennu wuxuu miisaamay koob kasta oo shaaca ka qaaday in halka koobka biyaha uu culeyskiisu yahay 8 wiqiyadood, koobka burku uu culeyskiisu yahay 5 wiqiyadood oo keliya iyo koobabka shukulaatada culeyskiisu yahay 6 wiqiyadood. Si fudud loo caddeeyo barta in dhammaan walxaha buuxiya booska koobka aysan ahayn isku qaddar.
Marka hadaad aragto cunto karinta oraneysa waxaad ubaahantahay 8 wiqiyadood oo shukulaato ah oo aad u maleyneyso, oh waan ogahay inta ay le'eg tahay oo gaari koobkaaga. Waxaad si murugo leh naftaada ugu gaabisay 2 wiqiyadood oo shukulaato ah taas oo sababi karta in cuntadaadu ay fashilanto oo xitaa ma ogaan doontid sababta.
Mudaaharaadkii labaad, wuxuu naga codsaday midkeen inuu yimaado dhanka hore oo uu soo qaato xoogaa daqiiq ah qaabkasta oo aan isleenahay way fiicnaan laheyd. Ardaygu wuu yeelay sidii lagu faray wuxuuna soo qaaday burkii markaasuu fartiisa la simay. Kadib wuxuu miisaamay koobkii bur. Waxay ahayd 7 wiqiyadood! Laba wiqiyadood oo buuxa oo ka badan wixii ku jiray koobkii ugu horreeyay ee bur.
Waxay kuxirantahay hadba sida aad wax u qaadatid, sida burku u buuxo iyo sida qoyaanka hawadu tahay (haa xitaa qoyaanku wuxuu saameeyaa burka), waxaad yeelan kartaa qadar aad u kala duwan oo bur ah markasta oo aad qaadatid. Daqiiqda dheeriga ah runtii way badali kartaa cuntadaada.
Banaanbaxan ugu dambeeyay, wuxuu codsaday tabaruce kale. Ardaygan waxaa la siiyay cunto fudud oo loogu talagalay buskudka shukulaatada. Dhammaan maaddooyinka waxay ku jireen weel hortooda ah. Daqiiqda, subagga, sonkorta, ukunta, iwm. Ardayga waxaa laga codsaday inuu cabiro sida ugu dhakhsaha badan ee uu kari karo marka loo eego tilmaamaha iyadoo la isticmaalayo koobabka wax lagu cabbiro iyo malqacadaha. Dhanka kale, kuugga ayaa diyaariyay isla qaab isku mid ah isagoo isticmaalaya cabir.
Waxaad qiyaasi kartaa halka ay wax u socdaan. Ardaygu si dirqi ah uma helin waqti uu ku cabiro labada maado ee ugu horeysa ka hor inta uusan kariyuhu si buuxda u cabirinin wax kasta oo uu u baahan yahay isla markaana uu diyaar u yahay inuu isku daro cajiinka buskudkiisa. Markaad dubayso xirfad ahaan (ama xitaa hiwaayad ahaan) waqtigu waa lacag.
Marka bal aan dib u eegno sababta miisaanka uu aad ugu baahan yahay si sax ah wax loogu dubo
Koobabyada cabirku waxay cabbiri karaan oo keliya mugga, ma cufnaan karaan. Hal koob oo bur ah lama mid aha hal koob oo sonkor ah ama hal koob oo shukulaato ah.
Koobabyada cabirku sax maahan. Runtii waa wax aan macquul aheyn in la qaato qaddarka isku midka ah ee walxaha laba jeer waxayna u horseedi kartaa cuntooyinka la fashiliyey. Koobabka cabbiradu sidoo kale waxay sababi karaan dhibaatooyin markii labanlaabmayo ama labanlaabaayo cuntada sida maxaa yeelay farqi kasta oo yar oo xagga qiyaasta ah ayaa ku darsamaya qaaddo kasta.
Ku cabirida koobabka waxay qaadataa waqti badan oo dheeri ah waxayna keeneysaa saxamo badan oo wasakh badan. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad u isticmaasho koob cabbiraad ka duwan nooc kasta oo ah maaddooyinka iyadoo kuxiran waxa uu yahay (saliid, caano, sonkor, bur iwm).
Waa maxay cabirka jikada ugu fiican?
Waxaa jira TONS miisaanno ah oo aad u badan. Waxaad ka qaadan kartaa miisaan jaban dukaanka aad iibiso alaabada jikada. Kaliya waxaad ubaahantahay cabir xamili kara dhowr rodol oo culeys ah, waa mid weyn oo kugu filan oo aad ku arki karto aqrinta dhijitaalka ah xitaa weel weyn oo dusha sare ah waxaadna heysataa ikhtiyaar aad ku bedesho inta udhaxeysa garaam iyo ounces.
Tani waa Bakers Math cabirka miisaanka jikada in aan isticmaalo xilligan oo aan isticmaalay sannado. Waa xoogaa weyn laakiin waxaan jeclahay inaan awoodo inaan arko shaashadda si sahal ah xitaa weel weyn oo dusha ku yaal. Maaddaama aan ahay dubbixiye xirfadle ah oo dubista maalin kasta, runtii waan jeclahay cabirkan.
Qiyaastaani waxay qaban kartaa ilaa 17 rodol waxaana lagu qiyaasaa qiyaastii $ 45 Amazon.
Tani waa OXO Qabashada Fiican ee miisaanka jikada waxaan ku adeegsan jirnay iskuulka keega. Waa wax khafiif ah oo fudud oo la iska dhuujin karo marka aanad isticmaaleynin. Qaybta ugu fiican ayaa ah, shaashadda ayaa soo baxaysa si aad u heli karto badhanka oo aad si fudud ugu daawato shaashadda xitaa iyadoo weel dusha laga saaray. Faa’iido darrada ayaa ah inaysan sidaa u sii socon oo haddii aad hoos u dhigto, way jabi karaan. Laakiin iyagu waa miisaan wanaagsan oo bilow ah.
Qiyaastan ayaa qaadi karta 5 rodol oo qiimihiisu yahay $ 29 Amazon
Sidee u isticmaashaa cabbirka jikada dhijitaalka ah tallaabo-tallaabo
Markii ugu horraysay ee aan akhriyo cunto karis isticmaashay wiqiyado iyo garaam halkii aan ka cabi lahaa koobabka, xaqiiqdii waan baqay! Tani waxay ahayd mid shisheeye ah! Waxaan isla markiiba dareemay inaan ka baxay cunsurtaydii. Laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee la i tusay sida loo isticmaalo cabbirka jikada ee dhijitaalka ah, waxaan la yaabay sida ay ugu fududahay runti inay ahayd isticmaalka cabirka halkii aan ka cabi lahaa koobabka.
Miisaanka jikada ee dhijitaalka ah wuxuu caadi ahaan leeyahay badhamooyin dhowr ah oo kala duwan oo ku xiran hadba noocaaga. Badhanka awoodda, badhanka qaabka oo beddelaya cabbiraadaha wiqiyadaha ilaa garaam iyo badhanka eber ama tareenka. Akhriso tilmaamaha kula imanaya miisaankaaga oo isbarasho halka ay ku yaalliin badhannadan.
Sida loo isticmaalo miisaanka jikada ee dhijitaalka ah
Tallaabada 1 - U rog miisaanka adoo isticmaalaya badhanka awoodda
Tallaabada 2 - U dhig miisaankaaga halbeegga cabbirka cuntada aad ku baaqeysid (ounces = oz, grams = g) adoo isticmaalaya batoonka 'mode' ama 'unit' button. Dhagsii badhanka illaa muujintu ka akhrinayso cabirka saxda ah.
10 ciyaartoy oo kubbadda koleyga ugu weyn abid
Tallaabada 3 - Dhig weelka aad dooratay sida weelka wax lagu qaso ee miisaanka dushiisa. Waxaad arki doontaa in miisaanka la diiwaangelin doono oo la muujin doono miisaanka baaquli. Riix badhanka 'eber' ama 'tare' badhanka si aad uga saarto miisaanka baaquli oo aad dib ugu soo celiso muuqaalka eber.
Tallaabada 4 - Ku dar walaxdaada koowaad sida ku cad tilmaamaha cuntada. Mar haddii shaashadaada ay aqriso xaddiga saxda ah, jooji. Haddii aad wax badan ku darto, wax yar banaanka u soo saar. Aad u fudud.
Tallaabada 5 - Mar labaad taabo batoonka 'tare' si aad uga saarto miisaanka maaddooyinka aad hadda ku dartay.
Tallaabada 6 - Ku billow inaad ku darto maaddada soo socota sida ku cad habka loo karinayo illaa shaashadda laga akhrinayo tirada aad u baahan tahay.
Waa intaas! Qaab fudud oo fudud oo loogu daro maaddooyinka leh saxsanaanta ugu sarraysa oo aan laga baqaynin in qalad lagu sameeyo cuntadaada.
maxay kris iyo kim u fureen
Waxaa laga yaabaa inay dareento wax yar oo la yaab leh markii ugu horreysay ee aad tan sameyso laakiin waxaan kuu ballan qaadayaa inay kuu fududaanayso isla markaana waxaad dhawaan la yaabi doontaa sida aad waligaa ula macaamilaysey isticmaalka koobabka!
Ka waran haddii cuntadayda aysan lahayn cabiro culeys?
Haddii aad hayso cunto karis aad jeceshahay laakiin ku jirta koobabka waxaad u beddeli kartaa miisaanka! Waxa ugu fiican ee la sameeyo waa inaad naftaada beddesho, ha isku hallayn google maxaa yeelay waxaad heli doontaa natiijooyin aad u kala duwan.
Xusuusnow sidaan u idhi qofkastaba si gooni ah ayuu wax u qaataa? Waa inaad ku tiirsanaataa iskooladaada. Gaar ahaan haddii aad horey u sameysay cuntada sida guusha leh.
Si fudud ugu cabir maaddooyinka koobabka lagu cabbiro sidaad caadiyan ahaan lahayd ka dibna miisaami. Waxaan ku wareegayaa nus tobanka nus ee kuugu dhow si aan u fududeeyo. Marka Haddii aan qaado oo aan helo 4.7 wiqiyadood, waxaan isku soo koobayaa xitaa 5.
Qor qiyaastaada iyo kororkaaga, hadda waxaad haysataa cunto karis ounces ah (ama garaam) ah oo aad si kalsooni leh dib ugu abuuri karto waqti kasta. Qiyaas ahaan, haddii aad waligaa u baahatay inaad cunto siiso qof kale (sida haddii aad furatay rootiga) oo aad u baahatay inaad hubiso inay dib u abuurayaan ayeeyadaada cunnada sirta ah ee sirta ah sida aad u sameyso, waad ogtahay inay sidaas sameyn doonaan.
Kani waa shaxdeyda aan u isticmaalo beddelka maaddooyinka guud ee miisaanka cuntadayda.
Miyaan miisaamaa dareerahayga mise waxaan ku cabbiraa cabirro biyo ah?
Oh ounces dheecaanno, sidaad u wareersan tahay. Ciddii la timaadda taasi waxay u baahan tahay in la toogto. Runtii waxay sababtaa jahwareer badan erayga 'ounces' darteed. Waxay kaa dhigeysaa inaad KA fikirto inaad miisaanka ku cabireyso laakiin hoog, weli waxaad ku cabireysaa mug.
Dhammaan dareerayaasha buuxiya koob 80z ah isku miisaan ma aha sababo la xiriira kala duwanaanshaha cufnaanta . 8 wiqiyadood oo biyo ah oo miisaankeedu yahay 8oz laakiin 8 wiqiyadood oo wiqiyad ah oo sharoobada galleyda ah ayaa dhab ahaan miisaankeedu yahay ku dhowaad 12 wiqiyadood! Waalan huh Taasi waa sababta oo ah sharoobada galleyda ayaa ka cufan (ka culus) biyaha.
8 wiqiyadood oo biyo ah = 8 wiqiyadood
8 dareere ounces ah sharoobada galleyda = 12 wiqiyadood
Dartiis u fududaanta, cuntadeyda waxaan ku miisaamayaa wax walba. Aad ayey u fududahay in la xuso miisaanka oo keliya. Gaar ahaan cuntada sida dareerayaasha loo isugu daro si ka duwan waxyaabaha qalalan. Waxaa laga yaabaa inaan miisaamo 8 wiqiyadood oo caano ah, aan miisaanka ka saaro miisaanka, ka dibna 4 wiqiyadood oo labeen dhanaan ah, soo saaro, ka dibna 4 wiqiyadood oo saliid ah. Dhammaantood daqiiqad gudahood looma baahna in lagu wasakheeyo koobab badan oo lagu cabbiro.
Haddii aad la kulanto cunto karis si gaar ah u liis garaysa wiqiyadaha dareeraha ah ka dib ama u beddelo ounces ama isticmaal koob wax lagu cabbiro. Xeer # 1 si aad ugu guuleysato cuntada waa inaad marka hore raacdo habka loo karinayo.
Ka waran haddii aan u baahanahay garaam halkii ounces?
Dhawaan dad badan ayaa i weydiinayay cuntadayda ku jirta garaam halkii ay ka qaadan lahaayeen wiqiyadooda maxaa yeelay taasi waa habka caadiga ah ee dalkooda looga cabbiro. WAAN SI XAAS AH U badalayaa dhamaan kaararka cuntadayda oo aan waliba ku darayo garaam laakiin miisaanka jikada waa inuu lahaadaa ikhtiyaar u wareejinta garaam ama wiqiyadood.
Waxaad sidoo kale u rogi kartaa cuntooyinka ku qoran ounces-ka ilaa garaam si fudud u fudud.
1 ounce = 28.35 garaam. Marka haddii aad haysatid 8 ounces oo aad rabto inaad ogaato inta garaam ay tahay, ku dhufo 8 ilaa 28.35 si aad u hesho cabbirka garaamyada. Waxa kale oo jira in badan oo khadka tooska ah ah xisaabiyaha mitirka taasi waxay kaa caawin kartaa inaad cuntada ugu badasho garaam.
Maxaa ku saabsan cabirka malqacadaha?
Waayahay markaa farsamo ahaan cabiraya malqacadaha ayaa ka hor imanaya wax kasta oo aan hadda ka hadlay waayo waa cabbir mug leh. Sababta tan ayaa ah in sida caadiga ah aad ku cabirayso qaddar yar oo sidan ah, way adkaan doontaa inaad si sax ah ugu cabirto miisaan caadi ah.
Waxaa xusid mudan in cabiraada malqacadaha ay yihiin cabirro kaladuwan iyadoo kuxiran meesha aad aduunka ka joogto. Miisaska USA Tablespoon wuxuu hayaa 14.8 ml. Uk-ga 15 ml. Ustaraaliya gudaheeda, istaandarku waa qiyaas dhan 20 ml.
Marka hubso in qaadooyinkaagu ay u dhigmaan waddanka cuntada aad ka soo jeedo ama aad si shil ah ugu dari karto waxyaabo aad u badan ama aad u yar.
Markii aan ka shaqeynayay rootida, cuntooyinkayagu aad ayey u weynaayeen oo waxyaabaha sida budada dubista iyo milixda waxay ahaayeen kuwo miisaan ah oo aan ku jirin malqacadaha wax lagu cabiro.
Waxaan rajeynayaa in tani ay ka jawaabtay su'aalo badan oo ku saabsan sababta iyo sida loo isticmaalo cabbirka jikada ee dijitaalka ah si aad si sax ah u dubto. Sida had iyo jeer waxaad iiga tagi kartaa faallo wixii su'aalo ah ee aad qabtid waana inaad hubisaa inaad daawato muuqaalkan aniga oo tusaya ninkayga sida loo isticmaalo miisaanka jikada.
Marabtaa inaad waxbadan kabarato xirfada dubista? Iska hubi my sida loo qurxiyo keeggaaga ugu horreeya ee keega !
Sida Loogu Isticmaalo Miisaanka Jikada ee Dijitaalka ah ee Dubitaanka
Koobabka cabbiraaddu waa kuwa aan sugnayn, gaabis ah oo qasan! Dubistu waa cilmi. Xaqiijinta ayaa aad muhiim u ah. Khatar ha ugu lumin in aad lumiso maaddooyinkaaga, u isticmaal cabbirka jikada dubistaada.
▢Miisaanka Jikada Dijital ah
Sida Loo Isticmaalo Miisaanka Jikada
Xullo heerka cabbirkaaga (gram = gr) ama (ounces = oz) Marnaba ma isticmaalo ounces dheecaano.
Dhig weelka aad dooratay sida baaquli isku qasan dusha miisaanka. Waxaad arki doontaa in miisaanka la diiwaangelin doono oo la muujin doono miisaanka baaquli
Taabo batoonka eber ama talee ee miisaankaaga si aad uga saarto miisaanka baaquli oo aad dib ugu soo celiso muuqaalka eber. Asal ahaan waxaad u sheegaysaa miisaanka inaad iska indhatirto weelka oo aad kaliya cabirto waxa galaya saxanka.
Bilow inaad ku darto maaddooyinkaaga ugu horreeya sida burka illaa inta shaashaddaadu muujineyso qadarka saxda ah ee lagu daray. Waxaad si sahal ah uga jari kartaa maaddooyinka haddii aad wax badan ku darto.
Riix batoonka tareenka ama eber si aad shaashadda ugu soo celiso eber
Cabir maaddadaada xigta oo sidan ugu sii wad inta hartay ee karinta (waxaad sidoo kale gadaal iyo gadaal isugu beddeli kartaa garaam iyo wiqiyad haddii loo baahdo)
** Ku xirnaanta xiriiriyaha miisaanka ka muuqda fiidiyowgaan
(Waxaa laga yaabaa inaan kasbado qaddar yar oo ah $ haddii aad u adeegsato xiriiriyahan adiga oo aan qiimo dheeraad ah kugu fadhiyin)
Miisaanka jikada OXO
Miisaanka Miisaanka jikadeyda
sida loo sameeyo ganache shukulaatada qaro weyn
sida loo sameeyo cake strawberry leh strawberries dhabta ah
5 -ta ugu sarreeya gooldhalinta mar walba
sida loo sameeyo cake fondant